Qaadista Cadaadiska Xun ee Shiinaha Isticmaalka Rotary Airlock Valve saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Zili
Qaadista Cadaadis Xun Isticmaalka Rotary Airlock Valve
Magaca Alaabta: Cadaadis Xun oo Wadnaha Hawada Qufulka ah ee Rotary
Isticmaalka: Nidaamka gudbinta pneumatic cadaadiska xun
Walxaha: Waa la beddeli karaa (Birta aan daacin ama birta shubka)
Goobta lagu dabaqi karo：Hadhuudh, Warshada Daqiiqda Qamadiga, Warshadaha Quudinta
Qalabka lagu dabaqi karo：Budada, burka sarreenka
Shaqada：Hubi cadaadiska xasilloon ee habka gudbinta inta lagu jiro gudbinta pneumatic iyo dejinta.
· Tilmaamaha waxqabadka：Si sax ah u shubaya birta aan la taaban karin, rotor-dhammaad dhow, nooca isku xidhka, cutubyada daaqada daawashada oo ay samaysay aluminium alloy
· Lambarka shatiga:201420016643.0/201420016698.1
Gudbinta Cadaadiska Xun Isticmaalka Rotary Airlock Valve, marka loo eego isticmaalka macaamiisha, waxaan bixin karnaa rotor-dhammaad furan iyo rotor-dhammaad dhow. Qaab dhismeedka isku dhafka ah ee labajibbaaran ee gacmaha SF-ga is-saliid-free iyo giraanta xiridda VD ayaa la isticmaalaa. Marka loo eego dalabaadka macaamiishu, waxaanu sidoo kale qaadanaa qaab dhismeedka isku dhafka ah ee isku dhafan ee giraanta Gly ee waxqabadka sare leh iyo giraanta xidhida VD. Wajiga ugu dambeeya ee kanaalka is-dejinta, wejiga dhamaadka iyo qolofku waxay labanlaaban yihiin sahayda hawada, iyo isku xirka daaqada aluminium ee indho-indheynta ayaa ku lifaaqan.
Sida laga soo xigtay isticmaalka macaamiishu, nooca waalka rotary waxaa laga samayn karaa bir aan lahayn iyo bir tuuraysa.
Soo gudbinta cadaadiska taban ee loo isticmaalo rotary airlock valve waxaa inta badan loo isticmaalaa socodka bilaashka ah, walxaha aan isku xidhnayn sida burka sarreenka, badarka, bariiska, digirta kafeega, cusbada, iyo sonkorta. Caadi ahaan waxaa loo adeegsadaa duufaannada iyo aaladaha kale ee boodhka lagu ururiyo.
Q1. Waa maxay faa'iidooyinkaadu?
A1.Our Airlocks waxay si habsami leh ugu shaqeyn kartaa 6-8 sano oo leh SKF Bearings, ISO 600-3 wax kabka birta nodular, iyo naqshad xirfad leh oo leh shatiyadayada gaarka ah. Maadaama aan nahay wax soo saar, waxaan leenahay silsiladeena sahayda iyo nidaamka xakamaynta tayada. Markaa waxaan ku siin karnaa qiimo tartan ah iyo sidoo kale tayo wanaagsan.
Q2. Waa maxay nooca shuruudaha lacag bixinta iyo gaadiidka aad aqbasho?
A2. Waxaan ku aqbalnaa lacag bixinta Alibaba, TT, LC, gaadiidka hawada iyo gaadiidka badda ayaa diyaar ah.
Q3.Ma samayn kartaa rakibaadda taageerada iyo naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahidayada ama ma waxaad iibisaa oo kaliya valves rotary?
A3.Yes, taas oo diyaar u ah isticmaalka si loo sameeyo rakibidda iyo naqshadeynta sida waafaqsan baahidaada.
Hore: Birta Aan-Laawaha Ahayn ee lagu afuufo Valve Rotary Feeder
Xiga: Is- nadiifinta tooska ah ee qufulka hawada
ku dhici waalka rotary
ku qulqulaya waalka rotary
cadaadis taban oo gudbinaya valve rotary
valve rotary ee warshadda daqiiqda
valve rotary hoos duufaan
Qaadista Cadaadis Xun Isticmaalka Hawada Rotary...
Xakamaynta Elektarooniga ah, hawo xidhid, quudiyaha rotary, 3-Way weeciye Valve, 3 Way Ball Valve, valve rotary,